अब संक्रामक रोग नेपालमै उपचार हुने, ज्येष्ठ र बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार - Lokpath Lokpath
२०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार १९:२५
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ जेष्ठ बिहीबार १९:२५
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन आवश्यक बजेटको घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्वदेशमा नै सङ्क्रामक सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्नका लागि दक्ष प्राविधिक र आधुनिकीकरणसहितको अन्तरराष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी गङ्गालाल हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण अस्पताल, कान्ति अस्पताल र वीर अस्पताललगायत विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा विशषेज्ञ चिकित्सकको सेवासहितको सेटलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीका लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी निरोग निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न सुदृढ स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम र सरसफाइसहितको स्वस्थ्य जीवन अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
आयुर्वेदलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन गर्न स्थानीय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आरोग्य केन्द्र र व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गरिने छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा विपद् तथा महामारीक समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई सङ्क्रामक रोगको समेत अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालनमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित गर्न एकीकृत छाता ऐन ल्याइने छ ।